नेपालमै बन्यो लोन ओरिजिनेसन सफ्टवेयर, के–के काम गर्छ त यसले ?
काठमाडौं । एक्समार्ट प्वाइन्ट टेक्नोलोजीज्ले नेपाली बैंक तथा वित्तिय संस्थाको विस्तृत अध्ययन गरेर सबै खाले कर्जा प्रक्रियालाई सहयोगी हुने एक्समार्ट क्रेडिट सफ्टवेयर विकास गरेको छ । यसले सबै खाले ऋण
नेपालको संविधानलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायद्धारा सम्मान
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको संविधानले अंगिकार गरेका व्यवस्थालाई उत्कृष्ट ठह¥याउँदै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सम्मान गर्न सुरु गरेको बताउनुभएको छ । नेपालको संविधानले प्राप्त गरेको ‘फ्युचर पोलिसी सिल्भर अवार्ड–२०१९’
उपनिर्वाचन : आयोगले तोक्यो ३७ जिल्लामा निर्वाचन अधिकृत, को कहाँ खटिए ?
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचनका लागि यही कात्तिक १३ देखि लागू हुने गरी निर्वाचन अधिकृत तोकेको छ । आयोगले आइतबार गरेको निर्णयबाट न्याय परिषद्को परामर्शमा ३७ जिल्ला न्यायाधीशलाई मुख्य निर्वाचन
काठमाण्डौंका डिपो संचालकको ठगी धन्धा, यसरी परे कारबाहीमा (नाम सहित)
काठमाडौं । निर्माण सामग्रीमा ठगी गरेको आरोपमा काठमाडौं उपत्यकाका ३५ डिपो कारबाहीमा परेका छन् । ईटा, गिट्टी, बालुवा, चिप्स, ढुंगालगायत निर्माण सामग्रीमा ठगी गरेको आरोपमा उक्त ठिपोका ३५ जना संचालक
नातिबाबु भट्ट अमेरीका । हिन्दुहरुको महान चाड बिजया दशमी तथा शुभ दिपावलीको अवसरमा कोलोराडो निवासी नेपालीहरुले शनीबार सांझ एक संस्कृतीक कार्यक्रम आयोजना गरी शुभकामना आदान प्रदान गरेका छन् । नेपालीहरुको